समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराई, यादब र राईले केके भने हेर्नुस «
समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराई, यादब र राईले केके भने हेर्नुस
प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७६, सोमबार १९:४९
मुसुमुसु मुस्काइरहेका बाबुराम भट्टराईको बोल्ने पालो आयो। उनी जुरुक्क उठेर फुर्तिसाथ ड्यासमा पुगे।
प्रज्ञा भवनको हलभरि नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको समाजवादी पार्टीका नेता/कार्यकर्ता खचाखच थिए। भट्टराईले दुई वर्षको मेहनतपछि पार्टी एकीकरण भएकोमा बधाई दिए। कार्यकर्ताले ताली पड्काए, हुटिङ लगाए र सिठ्ठी बजाए।
नयाँ शक्ति र फोरमको एकीकरण घोषणा सभा सोमबार दिउँसो प्रज्ञा भवनबाट गरिएको हो। दुवै पार्टीका शीर्ष तहका नेतादेखि जिल्ला-जिल्लाका कार्यकर्ता पनि कार्यक्रम हेर्न आएका थिए।
बाबुरामले पार्टी एकताबाटै कुरा सुरु गरे।
भने, ‘धेरैले पहाडी र मधेसीको एकता टिक्दैन। यिनीहरु झगडा गरिराख्छन् भनेका छन्, त्यसलाई हामी पूरै खारेज गरिदिन्छौं। सामूहिक नेतृत्व (दुई जना अध्यक्ष) कस्तो हुन्छ देखाउनेवाला छौं, ढुक्क भएर बस्नुहोला।’
कार्यकर्ताले ताली बजाए।
बाबुराम रोकिएनन्। थपे, ‘नेतृत्वको घरझगडा हुने छैन। हिमाल, पहाड र तराई हेरेर पदाधिकारीको कार्यविभाजन गरेका छौं।’
उनले नयाँ शक्ति र फोरमबीच एकता हुँदा कसले जित्यो कसले हार्‍यो भन्नेतर्फ ध्यान नदिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। ‘कसले जित्यो, कसले हार्‍यो? को माथि को तल? उक्साइदिने मान्छेका भ्रममा नपर्नुहोला,’ उनले भने।
प्रतिपक्षी हुँदै सत्ता यात्रामा पुगेका बाबुरामले सत्तालाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिए। ‘सत्ताका लागि फोहोरी र पाखण्डी राजनीति गर्ने मान्छे हामी होइनौं,’ उनको भनाइ छ, ‘खुट्टा तानातान गरेर जनतालाई निराश पार्ने काम हुँदैन।’
अब समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर २ मा राजपासँग मिलेर बनेको संयुक्त सरकार छ। केन्द्रमा उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सहरी विकास दुइटा मन्त्रालय हातमा छ। तै पनि बाबुरामले सत्ता छाडिदिने चेतावनी दिए।
केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार नभए जुनसुकै बेला सरकार छाडेर सडक र सदनबाट आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने उनले बताए।
सरकारलाई चेतावनी दिएपछि बाबुरामले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, पार्टीका उपाध्यक्ष लालबाबु राउततर्फ हेर्दै प्रदेश २ लाई विकासमा नमूना बनाएर देखाइदिने अठोट गर्न आग्रह गरे। प्रदेश २ मा विकास गरेर देखाउन पाए अर्को चुनावमा सातै प्रदेशमा सरकार बनाउन पाइने उनको भनाइ छ।
यति भनेपछि बाबुरामको अनुहारमा थप चमक देखियो। उनले थप धुव्रीकरण आवश्यकता रहेको औल्याए।
‘राजपा, विवेकशील र जनमुक्ति पार्टीसँग पनि एकताबारे संवादमा छौं,’ उनले भने, ‘थरुहट, लिम्बुवान आन्दोलनमा जोडिएका साथीहरूसँग पनि कुरा भइराखेकै छ।’
उनले समाजवादी पार्टीभित्र आउन ढोका खुला राखेको बताएका छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट मक्किसकेको घर भएकाले कुन दिन ढल्ने ठेगान नभएको उनले दाबी गरे।
‘कांग्रेस र कम्युनिस्टका घरहरू मक्किसके। अब गर्‍ल्यामगुर्‍लुम ढल्नेवाला छन्,’ उनले भने, ‘विशेषगरी नेकपाभित्र उकुसमुकुस र निस्सासिएर बस्नुभएका साथीहरू त्यहाँबाट निस्कनुपर्छ।’
कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई बाबुरामले थारो गाईसँग तुलना गरेका छन्। ‘बेत बसिसकेको गाईलाई जतिसुकै दोहे पनि दूध आउँदैन। घाँस हालेर बस्नुको अर्थ छैन,’ उनले भने।
उनले भ्रष्टचारजन्य सरकारबाट केही पाउनेवाला नभएको उल्लेख गर्दै उद्योगी, व्यापारीलगायत निजी क्षेत्रलाई पार्टीभित्र आबद्ध हुन आह्वान गरे। चीन र भारतसँग असल सम्बन्ध राख्ने बताएका उनले पश्चिमा शक्तिसँग पनि दुश्मनी नभएको बताए।
यति भनेपछि केहीबेर रोकिएर बाबुरामले भने, ‘आउँदो चुनावसम्म हामी देशको पहिलो शक्ति बनेर जनताको मुहार फेर्छौं।’
बाबुरामले बोल्नुअघि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सत्तारुढ कम्युनिस्टको विरोध गरे। ‘हामी पनि पहिले कम्युनिस्ट थियौं, अहिलेका कम्युनिस्ट त कमाउनिस्ट भएछन्,’ आफू सरिक सरकारकै आलोचना गरेका उनले भने, ‘लुटतन्त्र, माफियातन्त्र र कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो।’
उपेन्द्रले राजपालगायत शक्तिलाई एकतामा सरिक हुन आग्रह गरे। ‘सानातिना सटर खोलेर ग्राहक आउँछ कि भन्दै कुर्ने दिन गए,’ राजपालाई पार्टी एकीकरण गर्न सुझाव दिँदै उनले भने।
प्रदेशलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी बनाउने कांग्रेस, कम्युनिस्टले देश बनाउन नसक्ने उपेन्द्रको भनाइ थियो।
उपेन्द्रले समाजवादी पार्टी देशैभर पकड भएको शक्तिशाली भएको प्रसंग निकाल्दा कार्यकर्ताले ताली बजाए। ‘लहानमा आन्दोलन हुँदा अब गोरखा चुप बस्दैन,’ अध्यक्ष बाबुरामतिर हेर्दै उपेन्द्रले थपे, ‘वीरगन्ज सुतेर बस्दैन। काठमाडौंमा आन्दोलन हुँदा देशै जुरुक्कै उठ्छ।’
कांग्रेस र कम्युनिस्टको आन्दोलन र औचित्य सकिएको दाबी गरेका उपेन्द्रले अब समाजवादका लागि समाजवादी पार्टीले नै आन्दोलनको नेतृत्व लिने दाबी गरे।
वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले सिंहदरबारमा अहिले स्याल बसेको भन्दै कटाक्ष गरे।
‘म ३० बर्षदेखि सिंहदरबार वरपर घुमिराखेको छु,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय त्यहाँ मैले सिंह देखेको छैन, स्यालहरू छन्। सिंह त आज मैले प्रज्ञा भवनमा देखेँ।’ उनले बाबुराम र उपेन्द्रलाई सिंहदरबार यात्राका लागि शुभकामना दिए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा पार्टी उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले पनि कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना गरे। समाजवादी पार्टी अब एक नम्बरको पार्टी बन्ने उनको भनाइ छ।
‘अब हामी सिंहदरबार क्याप्चर गर्छौं,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्रीले जस्तै भाषण गरेका सहअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई सिंहदरबारबाट घोक्रेठ्याक लगाएर पार्टीको झण्डा फहराउने बताए।
दुवै पार्टी विघटन गरी समाजवादी पार्टी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उपेन्द्रको हात समाउँदै बाबुरामले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने सन्देश दिएका थिए। समाजवादी पार्टी संघीय संसदमा १७ सिटसहित तेस्रो दल बनेको छ।